အဘယ်မှာရှိအကောင်းဆုံးအမျိုးသားပြတိုက်တွင်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်မှာရှိအကောင်းဆုံးအမျိုးသားပြတိုက်တွင်ဥရောပ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27/11/2020)
သင်ဘယ်မှာဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်ကိုရှာအံ့သြနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖုံးအုပျပါပြီ! ထိုသို့ဟုတ်မဟုတ် အတတ်ပညာ, အမျိုးသားရေး, သို့မဟုတ်သဘာဝက သမိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကနေပြတိုက်ကိုသင်အလွန်အံ့သြစေရန်ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်.
ပိုကဘာလဲ, သငျသညျဤအရာအလုံးစုံကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားခရီးစဉ် သင်တို့အဘို့အရှာနေလျှင် ခရီးသွားများ၏စျေးနှုန်းသက်သာနည်းလမ်းများ. ကျွန်တော်တို့ကိုဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်မှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြပါစို့အဘယ်မှာသူတို့ကိုတွေ့ရှိရန်:
Louvre Museum ပြတိုက်, ပဲရစ်, ပြင်သစ်
အဆိုပါ Louvre ဥရောပတွင်အကျော်ကြားဆုံးပြတိုက်တွေထဲကနှင့်ကမ္ဘာဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, anရိယာဖုံးအုပ် 72,735 နှစ်ထပ်မီတာ. ဒါကစိတ်ကူးပြတိုက်ထက်ပိုမှနေရာဖြစ်သည် 35,000 ပစ္စည်းများနှင့်ပဲရစ်၏မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်လျှင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် ရထားပဲရစ်သွားရောက်!
Venaria Real, တူရင်, အီတလီ
ဤနန်းတော်သည်၏အမည်လက်တင်ထံမှလာ အဆိုပါတော်ဝင်အမဲလိုက်ဖြစ်ပါတယ်, "တော်ဝင်အမဲလိုက်ခြင်း" အဓိပ္ပာယ်. ၁၇ နှင့် ၁၈ ရာစုနှစ်များတွင်, ၏အမဲလိုက်လေ့လာရေးခရီးသွားများအတွက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ခဲ့သည် Duke ချားလ်စ် Emmanuel II ကို. ယခုနန်းတော်က၎င်း၏ဘားရို့-စတိုင်အလှအပနှင့်အတူခေတ်သစ်ဧည့်သည်များ enchants. သငျသညျတူရင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတှေ့လြှငျသငျသညျကလက်လွတ်မနိုင်.
အဆိုပါပြတိုက်အတွက် Stream များက, Antwerp, ဘယ်လ်ဂျီယံ
အဆိုပါ Stream သို့မဟုတ်စရဖတို့ကအဆိုပါပြတိုက် Antwerp အတွက်အကြီးမားဆုံးပြတိုက်ဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် မြင်ကွင်းကျယ် ကြည့်ရှုခြင်း, အဆိုပါအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်လည်းမရှိ ခေါင်မိုးပေါ် ပြတိုက်၏. စရဖ၏ရှုပ်ထွေးသောလည်းရှိပါတယ် စားသောက်ဆိုင် အောက်ကတစ်ဦးကဖီး. သင်၌ရှိကြလျှင်ပြတိုက်သူ့ဟာသူချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်ရကျိုးနပ်သည် Antwerp.
သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
ထဲမှာနောက်ထပ်ပြတိုက် နယ်သာလန်, အဆိုပါ သမ္မာကျမ်းစာပြတိုက် တည်ရှိပါသည် အမ်စတာဒမ်. သငျသညျကမျြးစာကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်၎င်းသည်ဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. Bijbels သွားရောက်လည်ပတ်ဒတျချြလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကမျြးစာ၏အရေးပါမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ကူညီပေးသည်. ဒါဟာခြောထူးခြားတဲ့ပြတိုက်ဖြစ်ပါသည်, ချစ်သောသူများအတွက်ကောင်းစွာ-ကိုက်ညီ ဘာသာရေး သမိုင်း.
Kunsthistorisches ပြတိုက်, ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
Kunsthistorisches ပြတိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများအနုပညာပြတိုက်ဖြစ်ပါသည် သြစတြီးယား, ထို့အပြင်အနုပညာရဲ့ပြတိုက်အဖြစ်လူသိများ. ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံး display တွေ၏အချို့ Rembrandt ၏အကျင့်တို့ပါဝင်သည်, Michelangelo, Raphael, နှင့်ရုဗင်. ဒါဟာအနုပညာချစ်သူများအဘို့အဖွင့်ကတည်းကဒါဟာအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည် 1891. သွားရောက်လည်ပတ်မည်သူမဆို ရထားဗီယင်နာ အဆိုပါ Kunsthistorisches ပြတိုက်ကြည့်ရှုရန်စီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်.
MACHmit ကလေးများပြတိုက်, ဘာလင်, ဂျာမနီ
ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားများအတွက်, ကထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်ရပါဘူး MACHmit ကလေးများ ပြတိုက် ဂျာမနီ. သငျသညျဘာလင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလျှင်, MACHmit ထွက်စစ်ဆေးသေချာအောင်နှင့်၎င်း၏ အမျိုးမျိုး ဆွဲဆောင်မှု၏. သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာလူကြီးများအတွက်သင့်လျော်သောများမှာ, ထိုကဲ့သို့သောအနုပညာဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ်အများအပြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ, ပုံနှိပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, နှင့်တောင်တက် labyrinth.
Skansen ပွင့်လင်း-Air ကိုပြတိုက်, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်
Skansen Open-လေကြောင်းပြတိုက်ဆွီဒင်အတွက်၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံးခဲ့. ဒါဟာအတွင်းဖွင့်လှစ် 1891 နှင့်စတော့ဟုမ်းအတွက်အကျော်ကြားဆုံးပြတိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်. တော်ဝင် Djurgarden ထံမှတစ်ဦးကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင် Skansen သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ဆုကြေးငွေဖြစ်ပါသည်. နှင့်ယမ်-ဇာတိတိရိစ္ဆာန်များကိုမြင်လျှင်ချစ်သောသူများအတွက်, တိရစ္ဆာန်ရုံရှိတယ် သူတို့ကိုပြသသည်.
ဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်. သငျသညျသှားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် ယခုနှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ပြတိုက် #traveleurope europetravel eurotrip ပြတိုက် ခရီးသွား travelaustria travelfrance travelgermany netရာဝတီ traveltips